About Us - Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Co.,Ltd.
Ngwe Pinlae Livestock Breedings and Fisheries Company Limited is cent percent company of Myanma Economic Holdings Public Company Limited and is working in collaboration with companies at home and abroad in support of the Endeavour’s of the Government inamanner that will enhance national economic development. Beneficially Produce, cultivate and trade in Ngwe Pinlae Livestock Breedings and Fisheries Co.,Ltd.
Ngwe Pinlae Livestock Breedings and Fisheries Co.,Ltd. had been established in 4th October,2001, asaspecial company.Ngwe Pinlae Livestock Breedings. The company has functioning under Three Objectives;
(c) To boost Gross Domestic Products.
Ngwe Pinlae Marine Industrial Zone located at Yangon Region, Hlaing Tharyar Township near Shwe Pyi Thar Bridge. It was dimension 324.439 Acres in used 198.379 Acres. There was 80 plots which 1 plot has 2.3 acres to 3.5 acres. There were processing and Cold-store Plant, Fish/ Prawn auction market, Ice factory, Carton Box factory and others.
ငွေပင်လယ်မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မြန်မာ့ စီးပွားရေးဦးပိုင် အများနှင့် သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးထည့်ဝင်ထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တိုးမြင့်သေမည့် နည်းလမ်းဖြင့် အစိုးရနှင့် ပြည်ပရှိ ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ငွေပင်လယ်မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် အကျိုးရှိသော ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မွေးမြူခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ငွေပင်လယ်မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်(၃)ရပ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်-
(က) မြန်မာ့ ပင်လယ်ပြင်ရှိ ရေပေါ်/ရေအောက် သယံဇာတ ပစ္စည်းများကို အကျိုးရှိစွာ စနစ်တကျဖော်ထုတ်အသုံးချရန်။
( ခ) သားငါးကဏ္ဍတွင် ပိုမိုထုတ်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ပြည်သူလူထုသက်သာ ချောင်ချိရေးကို အထောက်အကူပြုစေရန်။
( ဂ) အမျိုးသားအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ရန်။
ငွေပင်လယ် ရေလုပ်ငန်း စက်မှုဇုန်
ငွေပင်လယ် ရေလုပ်ငန်း စက်မှုဇုန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရွှေပြည်သာတံတားအနီးတွင် တည်ရှိပါသည်။ အကျယ်အဝန်း ၃၂၄.၄၃၉ ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ၁၉၈.၃၇၉ ဧက အသုံးပြုကာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြေကွက် ၈၀ ရှိရာ ၁ ကွက်လျှင် ၂.၃ ဧကမှ ၃.၅ ဧကအထိရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် အေးခဲသိုလှောင်ခြင်း လုပ်ငန်းစက်ရုံ၊ ငါးအစာမှုန့် ထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ရုံ၊ ငါးနှင့်ပုစွန် ရောင်းချသည့် ဈေးကွက်၊ ရေခဲတုံးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း စက်ရုံ၊လှိုင်းတွန့်စက္ကူဘူးထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ရုံတို့ဖြစ်ပါသည်။